Shiinaha FPGA Wareegga Gudiga Xawaaraha Sare Soosaarida iyo Warshad | KAISHENG PCB
Daahan birta: Nickel koronto / Dahab adag iyo Dahab Xul ah
Lakabyada: 12 Lakabka PCB
Waxyaabaha aasaasiga ah: FR-4 + RO4003C
Dahaarka Birta: Electrolytic Nickel / Dahab adag iyo Dahab Xul ah Qaabka wax soosaarka: SMT + Lakabyada: 12 Lakabka PCB
Waxyaabaha aasaasiga ah: FR-4 + RO4003C Shahaadada: SGS, ISO, RoHS MOQ: Maya MOQ
Noocyada Kala-Bixiyaha: Laydh-la'aan (RoHS u hoggaansamaysa) Adeegyada Hal-Joogsi ah: Soo-saarista PCB Iyo shirkii PCB-ga Turnkey Tijaabinta: 100% AOI / X-ray / Visual Test
Keywords: Golaha PCB, soosaarka PCB, Dadweynaha PCB, Soosaarayaasha Golaha PCB, Kharashka Golaha PCB, Golaha PCB raqiis ah, Shirkadaha Golaha Gudiga Wareegtada Daabacan
Maxaad u dooranaysaa PCBFuture?
1. Dammaanad qaad xoog leh
Aqoon isweydaarsiga SMT: waxaan soo dhoofsannay mashiinno meeleyn ah iyo qalab kormeer badan oo indhaha ah, oo soo saari kara 4 milyan oo dhibic maalintii. Nidaam kasta waxaa lagu qalabeeyaa shaqaalaha QC si loo ilaaliyo tayada wax soo saarka.
Khadka wax soo saarka DIP: Waxaa jira laba mashiin oo alxanka lagu dhejiyo. Shaqaaluhu waxay xirfad ku leeyihiin alxamida walxo kala duwan oo fiilooyin ah.
2. Hubinta tayada, waxqabadka kharashka badan
Qalabka dhamaadka-sare wuxuu dhejin karaa qaybo qaabab sax ah, BGA, QFN, 0201 qalabka. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa tusaale ahaan loogu talagalay rakibaadda gacanta iyo meeleynta agabyada waaweyn. Labada shaybaar iyo dufcaddo waaweyn iyo kuwo yaryarba waa la soo saari karaa.
3. Khibrad qibrad leh oo ku saabsan SMT iyo alxanka alaabada elektarooniga ah, gaarsiinta xasiloon
U fidiyaan adeegyo uruursan kumanaan shirkadood oo elektaroonig ah, oo ku lug leh adeegyada kaabayaasha qashin-qubka ee SMT noocyada kala duwan ee qalabka baabuurta iyo boorarka lagu xakameeyo warshadaha. Badeecadaha waxaa loo dhoofiyaa Yurub iyo Mareykanka si isdaba joog ah, tayada waxaa xaqiijin kara macaamiil cusub iyo kuwa duug ah.
Qalabka waxaa lagu keenayaa waqtigii loogu talagalay gudahood 3-5 maalmood ka dib dhammaystirka caadiga ah, ama waa la geyn karaa isla maalintaas.
4. Awoodda dayactirka adag iyo adeegga ka dambeeya iibka kadib
Injineerka dayactirka wuxuu leeyahay khibrad qani ah wuxuuna hagaajin karaa alaabada cilladaysan ee ay keeneen alxanka dayactirka ee kaladuwan, waxaanan hubin karnaa xaddiga isku xirka guddi kasta oo wareeg ah.
Adeegga macaamiisha ayaa ka jawaabi doona wakhti kasta 24 saacadood gudahood waxayna xallin doonaan amarkaaga sida ugu dhakhsaha badan.
Habka wax soo saarka PCBA:
Ka shaqeynta balastarka SMT
DIP ka shaqaynta qalab-ku-xidhka
Shirkii alaabta la dhammeeyay
Faa'iidooyinka guddiga xakamaynta warshadaha PCBA ee macdanta PCB
Qiimaha iibsiga oo hooseeya. Waxaan haynaa shaqaale wax soo iibsi oo xirfad leh kuna xeel dheer qalabka elektarooniga ah isla markaana wada shaqeyn dheer la leh kanaallo wax soo iibsi oo tayo sare leh laguna kalsoonaan karo. Waxay asal ahaan gaaraysaa eber walxaha MOQ.
Yaree qarashyada shaqaalaha, waxaan ku qalabeysan nahay iibsi elektaroonik ah, injineero koronto, qalab elektiroonig ah iyo qaybo IQC ah, macaamiisha uma baahna inay iswaafajiyaan.
Si loo yareeyo kharashka maaddada, waxaan ku qalabeysan nahay qalab elektiroonig ah oo kala duwan, macaamiisha uma baahnid inay iswaafajiyaan.
Si weyn u yareeya qarashka isgaarsiinta, macaamiisha uma baahna inay ku xirtaan alaab-qeybiyeyaal fara badan, waxaan ka caawin doonnaa inay dhameystiraan adeegga.
Mas'uuliyadaha Cad. Haddii ay jirto dhibaato tayo leh, macaamilku uma baahna inuu xukumo haddii ay tahay dhibaato alaab ceeriin ah ama dhibaato habka wax soo saar. Waxaan si buuxda masuul uga nahay.
PCBFuture waa soo saare PCBA OEM oo macaamiisha siin kara wax soo saar PCB xirfad leh, wax soo iibsasho, PCBA hal-joojin wax soo saar deg deg ah iyo adeegyo kale oo tayo sare leh macaamiisha. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid ama aad weydiiso, si xor ah ula xiriirsales@pcbfuture.com , waxaan kuugu soo jawaabi doonnaa ASAP.
Hore: Adeegyada Golaha Flex PCB
Xiga: Guddiga Xakamaynta Warshadaha Golaha Turnkey